Mpanakanto fanta-daza momba azy ireny
Ireo mpanakanto malaza dia manambara ny atao hoe zavakanto sy ny dikany amin'izy ireo
Jereo ny fiainana amin'ny alalan'ny zavakanto miaraka amin'ireto teny nalaza ireto
Ho an'ny mpanakanto, ny tononkalo dia tonon-kira. Ilay mpanakanto dia miresaka aminao amin'ny loko mamirapiratra, sakana feno fahasahiana, ary andalana tsara. Mipaoka ny tsiambaratelony izy, mizara ny hafanam-pony, maneho ny alahelony ary maneso ny fahatsapanao. Vonona hihaino ny fitenin'ny zavakanto ve ianao?
Manentana ny olona ny zavakanto. Diniho ny asa nataon'i Michelangelo, Picasso na Leonardo da Vinci. Miangona ny tranom-bakoka ny olona hankasitraka ny asany. Ny sary hosodoko sy sary sokitra ary sary sokitra no tena liana amin'ny fahalalàna.
Ireny mpanakanto ireny dia niaina taonjato maro lasa izay, nefa mbola manentana ny taranaka taranaka mpanakanto ny asany.
Mpanakanto malaza momba ny dikan'ny zavakanto
Ireto misy sary avy amin'ny artista 12 malaza. Ny teny nomen'izy ireo dia niteraka fiakarana vaovao tamin'ny famoronana. Mamporisika anao izy ireo mba hahazo fitaomam-panahy mba haka ny penseranao sy ny paletteo.
Ilay mpanakanto avant-garde Aostraliana Brett Whiteley dia manohy mitazona ny famoronana artista, sy ny olon-tsotra, manerana izao tontolo izao. Nahazo ny loka natokana indrindra tamin'i Aostralia izy, Archibald, Wynne ary Sulman, indroa. Noforonin'i Whiteley ny zavakanto tany Italia, Angletera, Fidji, ary Etazonia.
"Tokony hahagaga, handika, hanova ny zava-misy. Tokony hiasa eo amin'ny vatan'ny fahamarinana ny paranoia."
Ilay mpanao hosodoko mpanao peta-drindrina amerikanina sy ny mpaka sary Edward Hopper dia nalaza tamin'ny sary hosodoko solony, fa nanao ny marika ho toy ny miloko akorandriaka ihany koa izy. Ny fiainana Amerikanina tsy tapaka sy ny vahoaka dia roa ny mozika Hopper.
"Raha afaka miteny amin'ny teny aho, dia tsy misy antony tokony handoko."
Ny malaza amin'ny zavakanto i Francis Bacon, mpanao sary sokitra malaza sy britanika malaza. Ny sary nampiasainy dia mena sy mavitrika. Izy no mahafantatra tsara ny asany, Fahatakarana telo ho an'ny Figoria ao amin'ny Base of a Crucifixion (1944), Fianarana ho an'ny Self-Portrait (1982) ary ianarana ho an'ny Self Portrait-Triptych (1985-86).
"Ny asan'ny mpanakanto dia mampitombo foana ny mistery."
"Picasso no antony nandoko ahy. Izy no raim-pianakaviana, izay nanome ahy ny faniriana handoko."
Iray amin'ireo mpahaikitrana malaza sy mpanakanto tamin'ny taonan'ny Renaissance , Michelangelo, sy ny asany dia namorona zavakanto tandrefana. Ny sary sokitra Italiana, ny mpanao hosodoko, ny poeta, ny mpanao mari-trano, ary ny injeniera dia malaza amin'ny sary hosodoko avy amin'ny Genesisy eo amin'ny vala ary mampiseho ny Fitsarana Farany eo amin'ny rindrin'ny Chapelle Sistine any Roma. Izy koa no mpanao mari-trano ny Basilica Md Piera.
"Raha fantatry ny olona ny fahasarotako niasa mba hahazoana ny fahaizako, dia toa tsy mahagaga mihitsy izany."
Ilay mpanakanto Espaniola Pablo Picasso dia iray amin'ireo artista mahery indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Niara-niasa tamin'ny hetsika Kiobista izy ary fantatry ny ankamaroan'ny asa toy ny Proto-Kiobista Les Demoiselles d'Avignon (1907), sy Guernica (1937).
"Tahaka an'i Raphael aho, tahaka ny zaza, fa efa naka ahy nandritra ny androm-piainana toy ny zaza."
"Manary ny vovoky ny fiainana andavanandro ny zavakanto."
"Ny ankizy tsirairay dia mpanakanto. Ny olana dia ny fomba hijanonana ho mpanakanto raha vao mihalehibe izy."
Ilay artista Scottish, Paul Gardner, dia namorona fifaninanana artista Eoropeana sy Scottish tamin'ny alalan'ity zavakanto ity.
Ny bodisma sy ny filozofia tany atsinanana no fitaoman-keviny lehibe.
"Tsy vita ny loko iray - mijanona fotsiny ao amin'ny toerana mahaliana."
Ilay mpahaikanto frantsay Post-impressionist Paul Gauguin dia nahazo mari-pankasitrahana marina fotsiny. Ny fomba fanandramany manandrana loko dia nahatonga azy hijoro ho an'ny impressionistes. Gauguin dia mpikambana mavitrika amin'ny hetsika symbolistista, ary nitarika ny fananganana ny fomba amam-panao Synthetista, ny Primitivism, ary ny fiverenana amin'ny fomba pastôraly.
"Nakatona ny masoko mba hahita."
Rachel Wolf dia mpanakanto amerikana sady mpanoratra maimaim-poana. Nosoratana boky maro momba ny hosodoko toy ny Keys to Painting izy: Volo sy volom-borona , Tsiambaratelo momba ny ravin-kisoa , String Genius: Ny tsara indrindra amin'ny fisehony , ankoatra ny hafa.
"Ny lokony dia mahafinaritra, ny lokony dia tsotra fotsiny, ny sakafo gourmet amin'ny maso, ny varavarankelin'ny fanahy."
Ilay mpihira Amerikana Frank Zappa dia nanao mozika nandritra ny telopolo taona mahery. Nanao rock izy, jazz, ary karazana mozika hafa ary nitarika sarimihetsika sy lahatsary mozika. Zappa dia nofantsihana tamin'ny loka Grammy Lifetime Achievement tamin'ny 1997.
"Ny zavakanto dia manao zavatra tsy misy dikany ary mivarotra izany."
Ilay mpanao hosotra britanika malaza, Lucian Freud, dia nankalaza ny sariny tsy hita maso sy sary hosodoko. Ny zavakanto dia manana mari-pahaizana ara-tsaina ary matetika no mitantara ny fifandraisana tsy dia mampahery eo amin'ny mpanakanto sy ny modely.
"Arakaraky ny fijerinao ny zavatra iray, dia lasa miavona kokoa izy io, ary, raha ny marina dia ny tena izy."
Paul Cezanne dia mpahaikanto frantsay sy mpahaikanto an-tsoratra impressionista. Paul Cezanne dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana fifandraisana misy eo amin'ny Impressionism faha-19 sy ny taonjato faha-20. Ny firaiketam-peon'i Cezanne dia mametraka ny zava-misy fa na dia nitsipaka azy aza ireo mpitsikera dia nanandratra azy nandritra ny androm-piainany ny mpanakanto tanora.
"Misy loko ny loko, ary miaraka amin'izany fotsiny, fa tsy amin'ny lojikan'ny atidoha, izay tokony hampifanarahan'ilay mpanao hosodoko."
Ilay mpanakanto Frantsay Robert Delaunay dia nanomboka ny hetsika Orphism sy ny vadiny Sonia. Ny endriky ny zavakanto dia nampiasaina tamin'ny endrika symmetrika, ary nanjary nanintona kokoa ny fiainana taty aoriana.
"Ny sary hosodoko dia fiteny mazava."
Mark Twain quotes izay hamela anao ny fitenenanao-mifatotra
Teny nalaina mba hankalaza andro nahaterahana
Teny nalaina momba ny fisakaizana sy fitiavana
Ireo mpivady tsara tarehy mampihetsi-po
Funny Quotes sy Proverbs
Famaranana farany: karazan-tsivana, boky ary tantara
Ireo 15 Quotes Doggie dia miteny anao hoe nahoana ny alika no mendrika
'Medea' Teny nalaina
Mafana ny 1965 Mercury Comet Caliente
Manan-jo Ny Lalàm-panorenana ve Ireo Mpifindra-monina Tsy Azo Tsaraina?
Ny sarany sy ny tombontsoa avy amin'ny lalàna momba ny governemanta Amerikana
Ahoana ny fomba hanamboaran-trano an-trano
Tari-dalana ho an'ny mpitsidika ny fanondroana ny hazo
Ny Adin'i Meksika
Safidy ho an'ny fitsabahana any Syria
Ireo Elefanta Taoista
Karazan-tsiram-bolan'ny Primatine voaangona rehefa mivarotra hazo
Manao ahoana ny fomba fitaratra ny endriky ny kisary
Alemana ho an'ny mpandresy: Torohevitra fianarana
The Cycle of Life of a Spider
John Adams, filoha faharoa an'ny Etazonia
Fitsaboana marindrano sy fanadinana fandaniana amin'ny fandaniana
Nahoana no misafidy ny fanalan-jaza ny vehivavy: antony manoloana ny fanapahan-kevitry ny fanalan-jaza
Fankalazana ny Taombaovao Iraniana: Nowruz Mubarak
8 Ny tena marina momba ny fanelezana ny telefaona
Inona no mampidi-doza amin'ny baomba migaingaina?
Mod Podge Collage sy Decoupage Medium
Famaritana ny mety ho fiovan'ny toetr'andro